Fumana itemplate ye-UTM yeJografi ngokwazisa ngeGeofumadas -Geofumadas
NgoSeptemba, 2013 Ukulanda, Geospatial - GIS
Ngexesha elincinci siya kuba sinika itemplate ye- «Guqula ukuguqulwa kwe-UTM kulungelelwaniso kwiJografi», ikhuthaza iGeofumadas.
Nesi template ungangena UTM ulungelelanise, njengomzekelo: X = 1,740,564.29 Y = 3,396,718.08, ebonisa indawo 19 emantla. kunye ne-Spheroid GRS80, kwaye ngenxa yoko uya kufumana i-latitude kunye ne-longitude ngeedigri, imizuzu kunye nefomathi yemizuzwana njengoko kubonisiwe kumfanekiso.
Kodwa ithemplate ayilona kuphela eyaziwayo, kodwa iquka izilungelelaniso kwiimigangatho, imizuzwana kunye nemizuzwana, kunye nezilungelelwaniso kwiimali ezide kwaye ziqhathanise lat, njengoko umfanekiso olandelayo ubonisa.
Ngokwesiqhelo itemplate ixabisa i-4.99 yeedola zaseMelika, kodwa kwiintsuku ezimbalwa iya kufumaneka ukuze ikhutshelwe ngokutshintshiselana nokwazisa indawo yeGeofumadas. Ubungakanani bunqunyelwe.
Nayi imigaqo yokukhuthazwa:
1. Kuya kufuneka wenze uluvo kwiphepha leGeofumadas, kwiforum, ibhlog okanye iphepha. Oku kufuneka kuhambelane nomxholo owukhuthazayo (Ubunjineli, iteknoloji, i-cartography, i-GIS, iGoogle Earth, njl. Ukuphonononga iindidi zethu kwaye uya kubona ukuba isifundo sinokubanzi kunangaphambili. Asamkeli ukunyuselwa kuTwitter okanye kuFacebook.
Ukuba indawo yeyakho, kulula kuba ungayifaka kwinqaku esele likho. Ukuba awunaso isiza, ungakwenza oko ngokunika ingxelo kwinqaku okanye ukungena kwisiza sangaphandle kodwa ngentlonelo efanelekileyo kunye nomgangatho. Asinamdla kugaxekile okanye kuphawula ngezimvo.
2 Amazwana owenzayo malunga nesiza kufuneka abe yendalo, asiyi kwamkela izimvo ezifana:
-Vean Geofumadas, kuhle
-Ndincoma i-Geofumadas, kuninzi ukufunda
Ngoko siyakhathalela ukuba udala, ugalela into kwingxoxo, kwaye ubhekisela kwiphepha eliphambili leGeofumadas (http://geofumadas.com)
Ngoko, ukuba unomdla kule template, thumela isiphakamiso sakho.
3. Amagqabantshintshi kufuneka avunywe nangubani na omodareyitha isiza, ke kuya kufuneka uyazi loo nto.
[ifomu-lonxibelelwano-ifomu = '3 ′]
Musa ukwenza ukukhuthazwa ngaphambi kokuba siwamukele, silinde impendulo yethu okanye isiphakamiso ukuze ukwazi ukuyikhuthaza.
Siza kukuphendula ngokukhawuleza. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nxibelelana nathi: umhleli (ku-) geofumadas.com
Qaphela: Unyuso luphelelwe lixesha.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ubhaliso oluvulekileyo lweeveki zeWinternGEO Webinars
Post Next I-OkMap, eyona nto ibhetele yokwenza kunye nokuhlela iimephu zeGPS. MAHHALAOkulandelayo »
Iimpendulo ze-10 "Zuza itemplate ye-UTM yeJografi ngokwazisa ngeGeofumadas"
Anghel Asitimbay uthi:
Kukho iinkqubo ezininzi ezinceda ukwenza ukuguqulwa kwezilungelelaniso, abaninzi banokwenza kodwa kufuneka ufake idatha enye kwaye kuthatha ixesha elide ukuba unolwazi oluninzi, njengoko kuboniswe kwiphepha ndiyifumene kakhulu kwaye kuya kuba luncedo kakhulu ukuba kwesi sixhobo.
Thumela isiphakamiso sakho, esibonisa indawo apho uya kuyenza khona.
Miguel Collado uthi:
Ngaba oku kukhuthazwa kusekhona ???
Ndingathanda ukupapasha elinye lamaphepha akho kwiphepha lam, phakathi kwabanye.
Tomas Urbano uthi:
Ixabiso le template alinakulinganiswa. Ixabiso kuba linceda abaqeqeshi abaninzi kwiindawo ezahlukahlukeneyo ukulungisa iingxaki ze-UTM Ukulungiswa kweeNdawo eziMmandla kunye nakwezinye izinto. Kwakhona ukuguqulwa kwenani elikhulu leDatums.
Ii-Geofumadas zibalaseleyo, zipapashwe ziincwadana ziye zandinceda kakhulu ukuba ndikhokele kwezinye iindawo apho ndiyintsha. Njengoko iteknoloji ishintsho, i-geofumed ivumela ukuba ndihlule phakathi koko ndiyifunayo nento endiyifumanayo, kwaye akuyinto encinci. Ndiyakuvuyela abantu abenza i GeoFumadas, kwaye ndiyathemba ukuba bayaqhubeka besinceda iminyaka emininzi.
Eddy Aliano uthi:
I-VADEMECUM yezicelo kwi-geospatial sciences ezivumelayo; khumbula, ucacise, uxoxe kwaye uphendule imibuzo emininzi ngokusebenzisa iziqulatho kunye nezixhobo. Kuyinto encedisayo kuleyo mihlaba eyenziwa rhoqo.
Mauro Rios uthi:
vuyisana, IPHEPHA ELINGCANDLEYO, AGIL, LUNGENYE I-RODEOS OKANYE IYAVUMA OKUYA KUQALA KWIQONGO ELIQHELELEYO.
KUMANDLA WAMANCEDO UKUFUNEKA UKUQHUBA IINKCUKACHA ZEGOGRAPHHI KANYE NDENZENZA.
ULina María Cerón Gómez uthi:
Ulwazi oluqulethwe kweli phepha luncedo kubafundi abahlukeneyo beefayili zobunjineli ezahlukeneyo, abathi, ngenxa yemisebenzi yethu eyahlukeneyo yobugcisa, bafuna ulwazi olukhethekileyo kwiinkqubo ezahlukeneyo zolwazi ngeendawo.
UGuillermo Alfonso Robledo Méndez uthi:
Ulwazi olufumaneka kweli phepha landinceda ukuba ndilawulwe i-MobileMaper6 yam iminyaka emibili ebhokisini yezinto ezifundwayo ngenxa yokungabi nolwazi lwendlela yokucwangciswa kwayo kunye nokubonga kumsebenzisi walolu phepha ndakwazi ukufumana ulwazi olufunekayo kwaye luphelele ukwenza umsebenzi wam wezeNgqongileyo.
hugo salguero uthi:
igalelo elihle kwi-engineering engineering, isixhobo esihle, ndiyayixabisa le ngcaciso iyaqhubeka negalelo, ezininzi izimpumelelo.